ဇိမ်ခံ Tours မှ India- Tour အော်ပရေတာ Bhubaneswar - 91-993.702.7574
ဇိမ်ခံ Tours မှအိန္ဒိယ
ဇိမ်ခံ Tours မှအိန္ဒိယ - အသစ်တစ်ခုကိုဦးတည်ရာကိုလေ့လာစူးစမ်းလိုပါသလား? သင်တို့သည်ငါတို့၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်။
1993 ကတည်းကသဲကျောက်စရစ် Tours မှအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးခဲ့ အိန္ဒိယတွင်ခရီးစဉ်အေဂျင်စီ အပြည့်အဝနှင့်ပြည့်စုံသောဇိမ်ခံများကိုအိန္ဒိယအတွေ့အကြုံကို tours ။
သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့နေရာရွေးချယ်ခြင်းအရေးပါသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ကန်သောခရီးစဉ်အော်ပရေတာတက်ကောက်နေတာ သာ. ကြီးမြတ်အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခွင့်အလမ်းဖို့သင့်ခရီးစဉ်စွန့်ခွာဖို့မကြိုးစားပါ။ အကောင်းဆုံးကို ... ဝိညာဏခရီးစဉ်သို့မဟုတ်စွန့်စားမှုလှုပ်ရှားမှုများတောင်းဆို? နွေရာသီအထူးသို့မဟုတ်ပျားရည်ဆမ်းခရီး packages များ? အကြှနျုပျတို့သညျဖုံးအုပျရရှိပါသည်။ ကျနော်တို့မြင်ကွင်းများကိုတွေ့မြင်ခြင်းနှင့်သင်ရုံလက်လွတ်မနိုငျသောအမှုတို့ကိုပြုရန်သင့်အားဖွင့်ဖို့ရှိပါတယ်။
ဗိသုကာ grandeur ၏ပွညျသားအစွမ်းကုန်ဆွဲဆောင်မှုနဲ့တွန်းလှန်ရာပူဇော်သက္ကာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ကြုံတွေ့ရပါသည်။
အနည်းဆုံးစူးစမ်း, အရှေ့မြောက်ဘက်၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မြေယာ unarguably သွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်ဆန်းကြယ်မှုများအရပျမြားနှငျ့ပရဒိသု unexplored ပါ!
ယင်း၏ sprawling နှင့်မြင်ကွင်းကျယ်ရှုခင်းတည်နေရာ, Meadows, လက်ဖက်ရည်ပန်းဥယျာဉ်နှင့်ပိုပြီးနှင့်အတူအိန္ဒိယ Explore ။
ရေခြားမြေခြား Tours မှ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ packages များအပေါ်အကောင်းဆုံးအပေးအယူတွေနဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုဖြတ်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နေရာများ Explore နှင့်ကြုံတွေ့ရပါသည်။
ရရှိနိုင်အွန်လိုင်းအားလပ်ရက် packages များ၏ကျယ်ပြန့မှသင်၏စံပြခရီးသွားဦးတည်ရာကိုအထုပ်စာအုပ်ဆိုင်နှင့်အိန္ဒိယကိုဖြတ်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နေရာများလေ့လာစူးစမ်း။
သီးသန့်တောရိုင်း - လှည့်လည် Odisha
ကာလကတ္တား - Gangasagar - Sundarbans
Khandala - Lonavala တစ်ဦးခရီးစဉ်ကိုယူ
အိန္ဒိယကျယ်ပြန့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်, အဆင်းလှရှုခင်းဆွဲဆောင်မှုအဆောက်အဦများနှင့်ဝှက်ထားလျက်ရှိသောဘဏ္ဍာနှင့်အတူတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဖြစ်ဖို့လူသိများသည်။ အိန္ဒိယအရှေ့ပိုင်းကမ်းခြေမှ Odisha ပြည်နယ်တည်ရှိသည်။ အရာအားလုံးသည်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုအမီလိုက်နှင့်သင့်မျက်လုံးများကိုမြင်လျှင်အပြည့်အဝမရမှီတိုင်အောင်သင်ပိုမိုတောင်းချင်လိမ့်မယ်။
သဲကျောက်စရစ်အတော်လေးကျေးဇူးတင်ဖြစ်ပါသည် ဘို့ သူတို့ရဲ့အဖိုးတန်စကားနှင့်ငါတို့ကိုဂုဏ်ယူဖန်ဆင်းတော်မူသောယင်း၏လူအများကလေးစားဖောက်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များမိသားစုနှင့်အပေါင်းအဘော်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အားလပ်ရက်ခံစားရန်သဲကျောက်စရစ်အသုံးပြုသွားမည်နှင့်တစ်သက်တာအတွေ့အကြုံတစ်ခုသေတ္တာပယ်ရှင်းပြီဘယ်လိုထွက်ပုံ။
သဲကျောက်စရစ် Odisha အတွက်အကောင်းဆုံးသောခရီးစဉ်အော်ပရေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်..
ဒါဟာသဲကျောက်စရစ် Tours မှနှင့် Travels နှင့်အတူအမှတ်တရအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆက်ဖတ်ရန်..
ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ Odisha ခရီးသွားခြင်း
ဘဝတစ်ခရီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ခရီးသွားမျှော်လင့်မထားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိလူများအသွင်ပြောင်းနိုင်မယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့် Odisha အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကူးဖို့သင့်စည်ကား နေ့မှစ. ခဏ Pause ။
အသက်ရှင်သင်ယူ, discover နှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မရရှိနိုင်သမျှသောဂုဏ်အသရေများကတအံ့တသြလိမ့်မည်။ လာကြခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့သူအပေါင်းတို့ကိုအလှတရားဇိမ်ခံကား Tours မှအိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်အတူကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များထံမှလှပသောအဆောက်အဦမှပင်မြင်ကွင်းများရန်, ငါတို့သည်သင်တို့၏ခရီးစဉ်တစ်လာပါတဦးတည်းဖြစ်စေခြင်းငှါအဖြစ်သန့်စင်သော ecstasy ခံစားရသည်။